Takamirira kwenguva refu itsva Mac Pro. The yazvino Mac Pro muenzaniso yakaziviswa kuWWDC munaChikumi 2013, ichiendesa iyo December, uye, yepamusoro-ye-iro renji system, iri kutarisa kureba kwazvo muzino. Asi heino nhau dzakanaka: zvese izvo zvava kuda kuchinja.
Munguva pfupi, Apple yakadzikisa mutengo pane yepamusoro-yekupedzisira Mac Pro sarudzo. Iyo 6-yakakosha Intel Xeon processor, maviri AMD FirePro D500 GPUs uye 16GB yeyemhando sarudzo yakadonha kubva pa3,899 kuenda ku $ 2,999; nepo $ 3,899 ikozvino unowana iwe 8-musimboti processor uye maviri maviri D700 GPUs. Dzvanya apa kuti uongorore sarudzo.
Asi nekufamba kwenguva, uye zvakanyanya zvinonakidza, Apple yazivisa yakanyorwazve Mac Pro - kunyangwe izvi zvisingaoneki kusvika muna 2018 pakutanga.
Mune chinyorwa ichi tinoremedza zvese nhau uye zviratidzo pamusoro peinotevera Mac Pro yekuvandudza. Unoda kuverenga nezve inouya iMac Pro? Tine iMac Pro preview pano.
Kuti uwane kukurukurwa kwakawanda kwekuuya kweApple inotangisa, tarisa kutenderera kwedu kukuru kwe Kufungidzira kweApple ye 2017. Uye kana iwe uri kufunga nezvekutenga imwe yemanje Mac Mac modhi, verenga Ndekupi kwekutenga Mac Pro kuUK uye vedu Mac yekutenga giredhi 2017.
Mac Pro itsva ichaburitswa riini?
Kwete kusvika muna 2018, maererano neApple, uye kana 'nyanzvi' dzichizotendwa, zvinogona kutora nguva yakareba.
Mac Pro Pro yazvino yakavhurwa kuWWDC 2013. Izvo zvinopfuura makore mana apfuura (kunyange Mac Pro isina kunyatso ngunza kusvikira muna Zvita - uye kuwanikwa kwakadzora zvekuti vazhinji vashandisi havana kuwana zvavo kusvika panguva inotevera chitubu). Inguva yenguva, ipapo, yekuvandudza.
Vaongorori vanowanzo simudza mubvunzo wekuti Apple ichazofuratira iyo Mac, iine iPhone ichiita chikamu chakakosha chebhizinesi rayo; pundit iwe ungangodaro wakanzwa nezve inonzi Steve Jobs yakambofungidzira kuti mazuva e desktop akaverengerwa. (Iye aitaura nezve iyo iyo iPad yaizo shandura makomputa. Nhamba dzevatengesi dzenzara iyoyo, kunyange isiri njodzi, vanopa kuti izvi hazvina kunyatsoenda kuronga.)
Nekudaro, zviri pachena kuti Apple haisi kutendeuka kubva pa Mac desktop pari zvino. MunaApril 2017 Apple yakadana vatori venhau kune yayo Chigadzirwa Kuzivisa Lab uye yakaita a nhevedzano yezviziviso zvine chekuita neMac mutsara, zvichizarura pakati pezvimwe zvinhu kuti diki diki kuMac Pro yave pedyo uye guru revamp richasvika muna 2018.
Uye, nepo Apple isina kutaura zvakadzama nezve Mac Pro padanho panguva yeWWDC kiyi muna June 2017, mune zvinoburitswa nhau nezve iyo itsva iMac Pro Apple yakasimbisa kuti iri "kushanda pane yakanyatsogadzirwazve, inotevera-chizvarwa Mac Pro yakavakirwa pro vatengi vanoda iyo yepamusoro-yekupedzisira, yakakwirira-nzira yekupedzisira system mune modular dhizaini, pamwe nekutsva kwepamusoro-kugumisa kuratidza" Heino zvese the nhau kubva kuApple's WWDC Keynote.
Kutaura muna Kubvumbi 2017 Apple yakaratidza kuti "ndizvo zvatiri kudaidza zvakare kufunga kweMac Pro".
"Chinhu chakanakira vedu vatengi pro" Phil Schiller
Panguva iyo Apple's Phil Schiller akati: "Tine timu inoshanda nesimba pazviri izvozvi. Tinoda kuivaka kuitira kuti tigokwanisa kuichengeta iri nyowani nekuvandudzika kwese, uye isu takazvipira kuigadzira iyo yepamusoro-yekupedzisira, yepamusoro-yekubvisa desktop desktop, yakagadzirirwa vatengi vedu vanotsvaga pro.
"... Zvino, iwe hauone chero zvigadzirwa izvo [zvakare zvinosanganisira Pro yekuratidzira, kuti ivhurwe pamwe chete nePro itsva] gore rino; tiri mukati meizvozvo. Isu tinofunga zvakakosha kuti tiumbe chinhu chakanakira vatengi vedu vanoda Mac Pro modular system, uye izvo zvinotora nguva yakareba kupfuura gore rino kuita. ”
Saka 2018 inoita kunge inguva yenguva. Zvinenge zvisiri zvisinganzwisisike kuti Apple itange chinhu mumwedzi yekutanga kusvika mitatu yegore rekarenda (haina kuita izvozvo kubva pamazuva eMacworld Expo muSan Francisco) saka kutanga kwezhizha 2018, pamwe kunowirirana neWWDC 2018, zvinoita kunge zvakanaka.
Nekudaro, zvinogona kutora nguva yakareba. Tinogona kunge takamirira kusvika 2019 Mac Pro isati yagadzwazve, maererano ne OSNews zvitubu. Sezviri pachena, "Mac Pro yakanga iri muLimbo mukati meApple. "Sarudzo yekuenderera mberi nekugadzira mod Pro yeMac Pro inoratidzika kunge yakaitwa chete mumwedzi yapfuura, nekuvandudza kutanga vhiki shoma dzakapfuura," maererano neshumo.
Iye munyori mushumo anofunga kuti zvichatora nguva yakareba kugadzira Mac Pro nyowani, uye achipedzisa achiti "Ini ndinofunga isu tinotarisira iyo Mac Pro yakanonoka 2018 kutanga, asi kazhinji hazvingadaro kusvika pakutanga kwa2019 zvisati zvaitika ngarava. "
The UK Tech Weekly Podcast timu yakakurukura hurongwa hweApple yeMac Pro muchikamu makumi matanhatu, yakadzikwa pazasi, kutanga na 60:18.
UK Tech Weekly Podcast inouya musi weChishanu. Tevedza podcast pa Twitter zvekudzokorora pane episodhi nyowani uye kupe hurukuro yenguva yemberi misoro.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve 21-inch iMac, kuongorora kwedu kweiyo modhi iri pano: 21-5inch 2017 iMac kuongorora uye kana iwe uchida kuziva zvimwe nezve 27-inch iMac, kuongorora kwedu kweiyo modhi iri pano: 27-inch 2017 iMac kuongorora.
Nei Apple isina hanya neMac Pro kwenguva yakareba?
Vachitaura pamusangano nevasarudziki vashoma vakasarudzwa, Apple yakadzokerwa kumirira kwenguva refu imwe Mac Pro (iyo Mac Pro haina kuona chero zvigadziridzo zvehardhe kubvira pakagadzwa nyowani muna 2013).
Icho chikonzero chekumirira: Apple's engineering timu yave kuedza kugadzirisa iyo Mac Pro kuti inyore uye nenzira kwayo isimudzirwe. Kushaikwa kwemasarudzirwo esarudzo ndiyo nyaya hombe kune vakawanda neMac Pro, uye zvinoita sekunge Apple yaive yakatarisana nenyaya imwecheteyo.
"Kana isu takamboita kumbomira mukukwiridzira uye nekuvandudza, tine urombo nazvo," akadaro Phil Schiller, Mutevedzeri Wepamusoro weApple weKushambadzira Kwenyika. Akawedzera kuti: "Zvakaitika neMac Pro - tichauya nechimwe chinhu chakanaka kutsiva."
Iyo kambani iri kuongorora zvakare muchina wacho wose, zvinoita kunge.
"Isu takazvigadzira isu kuita chidimbu chekona," chakaratidza Craig Federighi, Apple's SVP yeSoftware Engineering.
"Takumbira timu kuti iende kunogadzirisazve kuronga uye kugadzira chimwe chinhu chakanakira ramangwana kuti avo vatengi veMac Pro vanoda kuwedzera kuwanda mune ramangwana," akawedzera Schiller.
Hakasi kekutanga iyo Mac Pro vatengi vaifanira kumirira nguva yakareba kuti vadzore pane izvo zvinofanirwa kuve Mac yekupedzisira. Pamberi pekutanga kuvambwa kweMac Pro kumashure muna 2013 vatengi vaive vakamirira kubva 2006 kuti vadzore, uye vatengi kuEurope vaisatombogona kutenga iyo Mac Pro yekare panguva iyoyo nekuti yainge isingaite maererano nemitemo yeEU. Shanduro yekare ye Mac Pro yakarambidzwa muEurope nekuti haina kutevedzera mitemo yeEU yekuchengetedza.
Zvino, kungoita kuti zvinhu zvinyanye kuoma, Apple payakatanga kugadziridza iyo Mac Pro kumashure muna 2013 yakatambudzika nekunonoka kuwanikwa. Apple akatanga azarura Intel Xeon (Ivy Bridge-E) Mac Pro kuWWDC munaChikumi 2013, asi iyo unit haina kunyatso tanga kutumira kusvika Zvita iro gore. Muchokwadi, kune vazhinji vatengi kugoverwa kweMac Pro kwakamanikidzwa zvekuti havana kugamuchira Mac avo matsva kusvika 2014 - mune zvimwe zviitiko kusvika Kukadzi, kana Kurume, kana mune mashoma april Kubvumbi.
Ndiri kufunga kuti ndedzipi dzimwe Macs dzese dzingangotanga? Verenga: Nyowani MacBook Pro runyerekupe | Nyowani MacBook Air runyerekupe | New MacBook runyerekupe | New iMac runyerekupe | New Mac mini runyerekupe
Ko iyo Mac Mac ye 2018 ichave neyakagadzirwa nyowani?
Tichifunga chokwadi chekuti Apple yaona zvakakodzera kuti udzokere kubhodhi yekudhirowa neMac Pro zvinoita sekunge tinogona kutarisira gadziriro nyowani yezvesaMac Pro Pro.
Apple yakaratidza kuti ndiyo yakasarudzika mikuru dhizaini yeMac Pro yekupisa iyo yakaratidza kuve ndiyo inomisa mukupa kudzokorodza kuMac Pro izvi zvinoita sezvingave zvichichinja mumhando itsva.
Munguva yekukurukurirana nevatori venhau nezvehurongwa hwemuchina mutsva uyu Federighi akaburitsa pachena kuti, Apple ichiratidzwa kuita chimwe chinhu chitsva uye chakasiyana neMac Pro, "hatina kutanga nechimiro ndokuti," hezvino kukurumidza muchina tingaisa mubhokisi iro. ' "Isu takatanga nechinangwa chekuti tishande uye takazouya neicho chandinofunga kuti chakagadzirwa nehungwaru kwazvo nekuvaka kwemaoko kuti zvifambise zvataifunga kuti ndizvo zvakanaka zvemagetsi ekuvaka."
Nenzira isingafadzi zvinoratidzika kuti chimiro ndicho chaive chakatemerwa Apple kana zvasvika pakuvaka Mac iyo yakakwanirisa izvo chaizvo zvinodiwa zvevateereri pro.
Heano imwe yekupedzisira titbit iyo inogona kupa zviratidzo pamusoro peMac Pro yenguva yemberi. Apple yakapihwa patent yeMac Pro, zvakanyatsoenderana nekuumbwa uye kurongeka kwezvinhu zvemukati uye yekumukati nzvimbo ye compact komputa system, maererano ne ripoti pana Patently Apple.
Zviripo iye zvino Mac Pro tech uye UK mitengo
MunaEpril 2017 Apple yakagadziridza Mac Pro radhi nemitengo mitsva yekugadzirisa.
Apple yakatenga dzimwe yepamusoro-yekupedzisira sarudzo pasi mune yakajairwa maviri masisitendi pamitengo yakafanana yemitengo. Saka, pamadhora 2,999 / £ 2,999 iwe zvino uchawana 6-musimboti Intel Xeon processor, maviri AMD FirePro D500 GPUs uye 16GB yekurangarira, uye for $ 3,999 / £ 3,899, iwe zvino uchawana 8-core processor uye maviri maviri D700 GPU.
Iwe unogona kuona iyo Mac Pro muApple Store pano.
Kunze kwekuti zvakananga kubva kuApple, unogona kutenga iyo Mac Pro kubva Apple Premium Vatengesi zvakaita se KRCS uye PC World. Unogona kuwana Apple Premium Mutengesi pedyo newe nekutsvaga pane saiti yeApple.
Chii processor iyo Apple ichashandisa mune idzva 2018 Mac Pro?
Zvinoita sekuti Apple ichagadzirisa Mac Pro neinotevera-chizvarwa Intel Xeon E5 processor, isu tingaone zvakare RAM mune yekupinda-chikamu shanduro, ikozvino kuti 15-inch MacBook Pro rosi ngarava ine 16GB seyakanyanya. Tichapinda mune zvimwe zvakadzama pasi apa.
Chii processor: Intel Kaby Lake kana AMD RYZEN 7
Iyo 2013 Mac Pro inoratidzira Intel's Xeon E5 V2 processors (kodhi-inonzi Romley) inopa kunosvika gumi nemaviri cores (senzira yekuvaka-kurongeka). Kudzoka munaSeptember 12 nyowani Xeon E2014 V5 chips (kodhi-inonzi Grantley) yakatanga kutumira - ichiunza iyo Hasell architecture kune pro workstations. Panguva iyo isu taifunga kuti processor ichakurumidza kuita nzira yavo kuenda kuMac Pro, asi hapana kusimudzira kwakabuda.
Idzo Intel Xeon E5 V3 tchipisi dzaive dzichishandiswa mutsva waDell's Xeon Precision Tower (5810, 7810 uye 7910) - tsvaga zvimwe pane zvaDell. Website. Aya maDell workstations anoshandisa Intel Xeon E5-2600 v3 processor yakatevedzana ane kana gumi nemasere kana gumi nematanhatu purosesa.
Ma processors muMac Pros aripo anogadziriswa anosvika ku3.5GHz for six-core sarudzo, 3.0GHz yesarudzo yechisere, uye 8GHz yesarudzo gumi nembiri. Tingaona kuwedzera zvishoma muhuwandu huno, asi isu tinokwanisa kuona zvakafanana nguva dzekumhanya, nema processors pachavo ari kukurumidza.
Zvinogoneka kuti iyo Mac Pro itsva, senge Dell iri pamusoro, inopa sarudzo yemakumi gumi nemana kana gumi nemaviri.
Iko kungangoita kuti isu tinoona nyowani Xeon processors muMac Pro. Zvinotarisirwa kuti tinoona anononoka Skylake (Xeon E3-1585 v5) kana nyowani Kaby Lake (Xeon E3-1205 v6) processors inosanganisirwa. Iyo Intel Skylake processor inoratidzira wachi yekuvhara ye3.5GHz, ina cores uye sere tambo - ine 8MB ye cache uye inoratidza iyo Iris Pro Graphics P580 - ine GPU ine simba yakavakirwa iyo inobatsira yakaderera-mbiri renders.
Nekudaro, neKaby Lake iri kutotumirwa kuOEMs uye vagadziri, isu tiri kunyanya kuona izvi processors nyowani inotumirwa neiyo Mac Pro itsva. Iyo rumored Xeon E3-1205 v6 imhando yekusekera - ine 3GHz yesimba rekugadzirisa - isu tinotarisira yakawedzera uye yakanyanyisa CPUs kuiswa mukati meMac Pro.
Imwe pfungwa, kunyangwe yakati kuti yakapenga, ndeyekuti Apple inogona kusiya Intel chips zvachose uye kutamira ku AMD. AMD yakaparura RYZEN 7 CPUs idzo "dzinovimbisa kuwedzera komputa tsandanyama pane watt kupfuura Intel" uye, maererano ne ripoti iyo itsva AMD RYZEN 7 1800X ingoisa nyika nyowani rekodhi rekodhi yeCinebench, inoremekedzwa CPU performance benchmark.
Chirevo icho chinotaura kuti chitsva cheRYZEN 7 chip lineup chakakwikwidza neIntel's i7 mutsara kusanganisira i7-6900K, i7-6800K, uye i7-7700K. Zvimwe zvimwe kumba kune iMac ipapo.
Related: i5 kana i7? Chii chinonzi turbo inowedzera? Heano maitiro ekusarudzira yakanakisa processor yeMac yako
Ndeapi madoko ayo 2018 Mac Pro ichava nawo?
Iyo yazvino Mac Pro yemitambo mitanhatu Thunderbolt 2 ports, zvinoreva kuti iyi Mac inogona kubatana kusvika kumatatu e4K kuratidzwa.
Kune zvakare 4 USB 3 ports; Dual Gigabit Ethernet; uye HDMI 1.4 UltraHD, pamwe chete neongororo yewaini yedhijitari odhiyo / analog mutsara kunze mini-jack; headphone mini-jack ine musoro wekutsigira; HDMI chiteshi inotsigira akawanda-chiteshi odhiyo yekuburitsa uye yakavakirwa-mutauri.
Code yakawanikwa mukati Mac OS X El Capitan yakapa hanzi iyo Mac Pro itsva inogona kunge iri munzira ichipa mamwe Thunderbolt ports mune fomu ye USB-3. Pane chirevo cheMac nyowani yakanyorwa "AAPLJ95,1" mukati meEl Capitan, according kuPike's Universum. Nekudaro, El Capitan ndiyo yaive operting system ye 2015-2016, saka zviri kutaridza senge nyaya dzekare manje.
Kubvumidza Thunderbolt 3 paMac Pro kunowedzera kunzwisisa sezvo kuunza Thunderbolt uye USB-C pa40Gbps - saka ndiyo yakanaka yenyika. (Verenga zvimwe nezve Thunderbolt uye iyo Mac Pro pano).
Vazhinji vetsika Mac Pro vashandisi vachiri kudaidzira kuti PCI slots, izvo zvaizotendera vashandisi kuwedzera nekukurumidza SSD uye makadhi evhidhiyo ari nani. Vamwe vanotobvunza zvemukati drive mabhana.
Ndeapi Graphics ayo 2018 Mac Pro ichava?
Iyo 2013 Mac Pro inoratidzira maviri-yekushanda-kirasi GPUs. Iyo Dual AMD FirePro D300 ine 2GB GDDR5 VRAM yega yega mune Quad-Core shanduro, uye Dual AMD FirePro D500 ine 3GB GDDR5 VRAM yega yega mune iyo 6-Core modhi. Iko zvakare kune yekuvaka-kune-sarudzo sarudzo yeiyo Dual AMD FirePro D700 GPUs ine 6GB yeGDDR5 VRAM yega yega (imwe yakawedzera £ 540).
Iyo AMD FirePro W7100, W5100 vanogona kuwana nzira yavo kupinda Mac Pro itsva (kunyange AMD yakaratidza itsva yayo FirePro W-natehwe paSiggraph muna Nyamavhuvhu 2014, saka vanogona kunge vari vadiki diki zvino).
Zvikasadaro, pane akakurumidza akanyanya mifananidzo kubva pane AMD's Fury papuratifomu inogona kunge yakatemerwa iyi Mac Pro itsva.
Kusarudzwa kwemakadhi evhidhiyo kwakakosha. An chinyorwa nevhidhiyo nyanzvi inotaura nezve Nvidia GTX 1080 iyo iri chiitiko chakakura zvekuti anofunga kuti: "Iyi kadhi yega ndiyo inonyanya kukonzera kuchinja mukushandira nzvimbo yemakomputa. Nekudaro kadhi haripindirane neMac Pro: "Kunyangwe Thunderbolt-yakabatana PCIe yekuwedzera chassis kune Mac Pro trashcan haizobatsire, nekuda kweyemukati bandwidth miganhu iyo Thunderbolt inayo zvichienzaniswa nemabhazi anomhanyisa aya makadhi eGPU. . Uye kanganwa nezvekumisa aya makadhi mune imwe chassis yekuwedzera ... hazvizoitika. "
Nekuti kushandisa kadhi iri neMac Pro hakusi pamubvunzo waanofanotaura: "kutama kukuru kwevashandisi veApple kwenguva yakareba (seni) kuenda Windows masisitimu ezvavanonyanya kuda pabasa. ”
Apple yaigona kusimuka kubva ku AMD neinotevera Mac Pro kunyange (zvakamirira munguva yakapfuura kubhururuka pakati pevagadziri vemakadhi efaidhi). Uye panguva ino panogona kunge paine chikonzero chakanaka: tambo pane Apple Support Nharaunda webhusaiti yakawedzera mhinduro painenge ichinyunyuta pamusoro pemakadhi asina kunaka emakadhi muLate 2013 Mac Pro, Apple yakabvuma kuti nhamba yeMac Pro ine makadhi asina kunaka uye kuti vatengi vakakanganisa vanogona kuita kuti nyaya yacho isungirwe. Kuti uve nechokuita nekugadziriswa kwemahara, unofanirwa kunge wakasangana ne "vhidhiyo yakaminama, hapana vhidhiyo, kusasimba system, kutonhora, restarts, shutdowns" kana system yekutanga kutadza.
Haisi ese Mac Pro asi, chete ayo anogadzirwa pakati paFebruary 8 naApril 11 2015, uye nyaya yacho inogona kugadziriswa nekutora yako Mac Pro Pro kuenda kuApple Store. Zvinofadza, MacRumours inotaura kuti nyaya dzinozivikanwa kuve dziripo ne AMD FirePro D500 uye D700 GPUs, ine AMD FirePro D300 isinganyatso zadzikiswe.
Nyaya idzi dzichamanikidza Apple kusarudza imwe grafiki kadhi inogadzira yeiyo inotevera Mac Pro? Kunyange pasina runyerekupe pamhepo dzinoratidza kudaro, isu tinofunga shanduko inogona kunge iri pamakadhi eMac Pro GPU.
Read more: Mac Pro Pro iMac
Mac Pro Pro ya 2018 ichava neyakawanda sei?
Parizvino iwe unowana 256GB PCIe-yakavakirwa flash chengetedzo seyakajairwa mune ese akajairwa Mac Pro mhando, nesarudzo yekuwedzera 512GB SSD ye- $ 180 kana 1TB SSD ye- $ 540.
Tinoda kuona kuchengetedza kwakawanda seyakajairwa paMac Pro, sevateereri vanowanzove vachishanda nemahara mafaira akanyanya. Sarudzo ye 2TB Flash yekuchengetera inogamuchirwa.
Yakakura sei RAM Mac 2018 ichave neyakawanda?
Iwe unogona kutarisira kunyange nekukurumidza kuyeuka mundangariro muMac Pro itsva.
Mhando dzazvino dzinopa 12GB RAM mune Quad-Core modhi, uye 16GB mune iyo 6-Code modhi seyakafanana. Iwe unogona kuwedzera 32GB RAM panzvimbo yekutenga ye £ 360, kana yakakura 64GB RAM ye- $ 1,080. Sezvatinotaura pamusoro, iyo 15-inch MacBook Pro ikozvino inouya ne 16GB RAM seyowo, saka isu taizotarisira kuti yakagadziriswa yekupinda-chikamu Mac Pro yaizoenderana izvo.
64GB RAM inganzwika seyakawanda kwauri, asi mamwe eaya maDell worksstations anogona kugara kusvika 1TB yeDDR4 RAM. Isu tinovimba kuti chizvarwa chinotevera cheMac Pros chichagadziriswa kune zvinopfuura makumi matanhatu nemasere (ma Slots mana e64GB).